Mayelana ne-JBH - AnHui Jin Bai He Medical Apparatus Co., Ltd.
I-AnHui Jin Bai He Medical Apparatus Co., Ltd.yasungulwa ngo-2013.
Inkampani eyisisekelo yokukhiqiza ngokuhlanganiswa kwe-R & D, amaqembu wokukhiqiza nawokumaketha aphesheya anemikhiqizo eyakhelwe yona kanye nemikhiqizo ye-ODM yamakhasimende.
Imikhiqizo emikhulu kufaka phakathi amaski wokuhlinzwa, amalifti eziguli, umbhede wasesibhedlela. Yonke imikhiqizo ithole izitifiketi ze-FDA, CE, kanye ne-CFDA ezentengiso emazweni angaphezu kwama-40 emhlabeni, amboze iningizimu neNyakatho Melika, i-Australia, iningizimu mpumalanga ye-Asia, maphakathi neMpumalanga, i-HK, Macao, iTaiwan nakwamanye amazwe.
▍ Ukuvakasha Kwefektri Line Imaski Production Line Work Ukubambisana & Izindaba Nemicimbi
▍ Ukuvakasha Kwefektri
Ngo-2018, i-JBH Wheelchair yathatha i-R.POON MEDICAL PRODUCTS CO. LTD. (Uniforce®️), ububanzi bemikhiqizo enwetshiwe ngamasu, njengePatient Lifter, Izinsiza Zokuhamba, Imikhiqizo ehlobene nokuphepha kweziNdlu eziBekezelekayo, njll. I-R.POON MEDICAL iyinkampani eyaziwayo eyasungulwa ngo-1983, eTaiwan, yathuthela eFoshan, China futhi manje esifundazweni sase-Anhui esinendawo engamamitha-skwele ayi-140,000 kanye namakhulu abasebenzi abangochwepheshe abanomoya weqembu wokuhlanganisa, ukuthokozisa, ukuqondanisa okusha kanye namakhasimende, ngokuqhubekayo benza imikhiqizo emisha yokunikela abadala nabasebenza ngezandla impilo elula, elula futhi engcono.
▍ Ifektri ENanjing City
Kutholakala eNanjing City, esifundazweni saseJiangsu (JBH Wheelchair) 12, 800 Plant Plant Production Plant.
▍ Ifektri EMingguang City
Kutholakala eMingguang City, esifundazweni sase-Anhui (Uniforce®️) 140, 000 sq. Isitshalo Sokukhiqiza.
Umugqa Wokukhiqiza Imaski
▍ Kungani Sikhiqiza Amaski
Empeleni njengomkhiqizi wamadivayisi wezokwelapha, i-JBH inabasebenzi bayo abaguquguqukayo nezinsizakusebenza eziningi ze-R & D ukusetha umugqa wokukhiqiza imaski wokuhlinza ongalahlwa, futhi wakwenza.
Isikhungo sokuzifihla ubuso sakhiwe efektri iJBH Anhui, edolobheni laseMingguang. Futhi manje sesinganikeza izingcezu ezingaphezu kwezinkulungwane ezingama-3 000,000 eziphephile nezifanelekile ezilahlwayo manje. Ubungeke ungabaze ukuyi-oda. Akunandaba ukuthi wamukelekile kakhulu ukuvakashela imboni yethu futhi.
▍ Ithimba le-R & D
Iminyaka engama-20 yonjiniyela abanolwazi embonini.
Ukuthuthukisa imikhiqizo emisha nento eyenziwe ngokwezifiso.
Impendulo emakethe esheshayo.
▍ Ithimba Lokuthengisa
I-24/7 yima ngokuhlinzeka ngamakhasimende.
Isikhathi esifushane sokuphendula.
Insizakalo esezingeni eliphakeme kakhulu ngemuva kokuthengisa.
▍ Ithimba Lokusebenza
Amakhono wokusebenza ngobungcweti, ayale amapulatifomu enethiwekhi angaphezu kwama-5 ukukhuthaza ukuthengiswa nenkulumo-ze.
ophakamisa isiguli ngogesi, embhedeni medical adjustable, umbhede oguquguqukayo weziguli, buso abalahlwayo, imaski yobuso bezokwelapha, ophakamisa isiguli wokubacindezela,
ophakamisa isiguli ngogesi, embhedeni medical adjustable, ophakamisa isiguli wokubacindezela, umbhede oguquguqukayo weziguli, buso abalahlwayo, imaski yobuso bezokwelapha,